Strategy SEO: Otu esi enweta ọkwa azụmaahịa gị na ọchụchọ Organic na 2022? | Martech Zone
Strategy SEO: Otu esi enweta ọkwa azụmaahịa gị na ọchụchọ Organic na 2022?
Anyị na onye ahịa na-arụ ọrụ ugbu a nke nwere azụmahịa ọhụrụ, akara ọhụrụ, ngalaba ọhụrụ, yana webụsaịtị ecommerce ọhụrụ na ụlọ ọrụ asọmpi dị ukwuu. Ọ bụrụ na ị ghọtara otú ndị na-azụ ahịa na search engines si arụ ọrụ, ị ghọtara na nke a abụghị ugwu dị mfe ịrị elu. Ụdị na ngalaba nwere ogologo akụkọ ihe mere eme nke ikike na ụfọdụ Keywords na-enwe oge dị mfe karị idowe na ọbụna na-eto eto ha organic ogo.
Ịghọta SEO na 2022
Otu n'ime isi mkparịta ụka m na ụlọ ọrụ na-enwe mgbe m kọwara njikarịcha search engine (SEO) taa bụ otú ụlọ ọrụ ahụ si gbanwee n'ụzọ dị egwu. Ebumnuche nke nsonaazụ ọchụchọ ọ bụla bụ ịnye ndepụta akụrụngwa na ibe nsonaazụ ọchụchọ (SERP) nke ahụ ga-adị mma maka onye ọrụ njin ọchụchọ.
Afọ iri gara aga, algọridim dị mfe. Nchọgharị ọchụchọ dabere na njikọ… na-akpakọba ọtụtụ njikọ maka ngalaba ma ọ bụ ibe gị yana ibe gị họọrọ nke ọma. N'ezie, ka oge na-aga, ụlọ ọrụ na-egwu usoro a. Ụfọdụ ụlọ ọrụ SEO na-arụkwa usoro njikọ ugbo ka artificially mụbaa visibiliti search engine nke ndị ahịa ha na-akwụ ụgwọ.
Igwe nchọta kwesịrị imeghari… ha nwere saịtị na ibe ndị nwere ọkwa na-adabaghị na onye ọrụ njin ọchụchọ. Nke ibe kacha mma abụghị ọkwa, ọ bụ ụlọ ọrụ ndị nwere obere akpa ma ọ bụ atụmatụ azụlink kacha elu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ogo nsonaazụ ọchụchọ na-agbada… ngwa ngwa.
Nchọgharị algọridim nyocha zara na usoro mgbanwe mere ka ụlọ ọrụ ahụ maa jijiji na ntọala ya. N'oge ahụ, m na-adụ ndị ahịa m ọdụ ka ha hapụ atụmatụ ndị a. Otu ụlọ ọrụ na-aga n'ihu ọha ọbụna goro m ka m mee nyocha nyocha nke backlinks mepụtara site na mmemme mgbasa ozi onye na-ahụ maka SEO ha. N'ime izu ole na ole, enwere m ike ịchọta njikọ ugbo na onye na-ahụ maka ya na-emepụta (megide usoro ọrụ search engine) na-etinye ngalaba ahụ n'ihe ize ndụ dị ukwuu nke ịbụ onye e liri na ọchụchọ, bụ isi iyi nke okporo ụzọ ha. A chụrụ ndị ndụmọdụ ndụmọdụ, anyị jụrụ njikọ ndị ahụ, ma anyị zọpụtara ụlọ ọrụ ahụ pụọ na nsogbu ọ bụla.
Ọ bụ m na ụlọ ọrụ SEO ọ bụla kwenyere na ha nwere ọgụgụ isi karịa ọtụtụ narị ndị ọkà mmụta sayensị data na ndị injinia dị mma na-arụ ọrụ oge niile na Google (ma ọ bụ engines ọchụchọ ndị ọzọ). Nke a bụ ntọala ntọala nke Google's organic ranking algorithm:
Ewetara ibe dị elu na nsonaazụ ọchụchọ Google n'ebe ahụ site n'ịbụ onye akụrụngwa kachasị mma maka onye ọrụ njin, ọ bụghị site n'ịgba ụfọdụ algọridim njikọ azụ.
Ihe kacha akpata ọkwa Google maka 2022
Ebe ndị na-ahụ maka SEO n'afọ gara aga nwere ike ilekwasị anya na saịtị na akụkụ teknụzụ nke weebụsaịtị na saịtị na backlinks, ikike nke taa nwere ọkwa chọrọ nghọta zuru oke nke onye ọrụ ọchụchọ gị na ahụmahụ onye ọrụ na ị na-enye ha mgbe ha họrọ saịtị gị site na nsonaazụ ọchụchọ. Nke a infographic si Uwe Weebụ Red na-arụ ọrụ dị egwu nke itinye ihe ihe kacha elu via Ndepụta Ngini Nchọta n'ime isi ihe ndị a:
Na-ebipụta ọdịnaya dị elu – Mgbe anyị na-arụ ọrụ n'itule na ịzụlite a Ọbá akwụkwọ ọdịnaya maka ndị cleints anyị, anyị na-arụ ọrụ na imepụta ọdịnaya kachasị mma ma e jiri ya tụnyere saịtị asọmpi. Nke ahụ pụtara na anyị na-eme ọtụtụ nyocha iji mepụta ibe zuru oke, nke a rụrụ nke ọma nke na-enye ndị ọbịa anyị ihe niile ha chọrọ - gụnyere mkparịta ụka, ederede, ọdịyo, vidiyo, na ọdịnaya anya.
Mee saịtị gị Mobile-Nke mbụ – Ọ bụrụ n’igwuba n’ime nyocha gị, ị ga-ahụ na ndị na-eji ekwentị mkpanaaka na-abụkarị isi mmalite nke okporo ụzọ search engine organic. Anọ m n'ihu elekere desktọpụ m kwa ụbọchị na-arụ ọrụ… ma ọbụlagodi m bụ onye ọrụ nyocha igwe mkpanaka na-arụsi ọrụ ike ka m nọ n'obodo, na-ekiri ihe nkiri TV, ma ọ bụ naanị ọdụ kọfị ụtụtụ m n'ihe ndina.
Melite ahụmịhe onye ọrụ gị – Ọtụtụ ụlọ ọrụ chọrọ a tuondu nke saịtị ha na-enweghị nyocha zuru oke ma ha chọrọ ya ma ọ bụ na ha achọghị ya. Ụfọdụ saịtị ọkwa kachasị mma nwere nhazi ibe dị mfe, ihe nrịgharị ụzọ, yana nhazi ntọala. Ahụmahụ dị iche abụghị ahụmihe ka mma… ṅaa ntị na usoro imewe yana mkpa onye ọrụ gị.
Nleta saịtị - Ibe weebụ bụ isi taa nwere ọtụtụ ihe ndị a na-ahụ anya na igwe nchọta karịa ọtụtụ iri afọ gara aga. HTML enweela ọganihu ma nwee ihe ndị bụ isi na nke abụọ, ụdị edemede, ihe ndị na-agagharị agagharị, wdg. Ọ bụ ezie na ibe weebụ dị mfe nwụrụ anwụ nwere ike ịkwado nke ọma, nhazi saịtị bụ otu n'ime ihe kachasị mfe iji kwalite na saịtị. Eji m ya tụnyere ịtụgharị kapeeti uhie… gịnị kpatara na ị gaghị eme ya?
Isi Weebụ Weebụ - Isi Weebụ Weebụ bụ ntọala dị oke egwu nke ụwa n'ezie, metrik dabere na onye ọrụ na-agụta akụkụ ndị bụ isi nke ahụmịhe onye ọrụ nke weebụsaịtị. Ọ bụ ezie na nnukwu ọdịnaya nwere ike ịdokwa nke ọma na igwe nchọta, ọdịnaya dị ukwuu karịa ihe a na-atụ anya ya n'ofe metrik nke Core Web Vitals ga-esi ike ịkụpụ nsonaazụ dị elu.
Weebụsaịtị echedoro - Ọtụtụ webụsaịtị na-emekọrịta ihe, nke pụtara na ị na-edobe data yana ịnata ọdịnaya sitere na ha… dị ka ụdị ndebanye aha dị mfe. A na-egosi saịtị echekwara site na otu HTTPS njikọ na oyi akwa sọks echekwara dị irè (SSL) akwụkwọ na-egosi na ezoro ezoro ezoro ezo niile data ezigara n'etiti onye ọbịa gị na saịtị ahụ ka ndị hackers na ngwaọrụ ndị ọzọ na-emetọ netwọk enweghị ike ijide ya ngwa ngwa. A webụsaịtị echekwara dị mkpa n'oge a, ọ dịghị ewepụrụ.
Welie ọsọ ibe - Sistemụ njikwa ọdịnaya ọgbara ọhụrụ bụ nyiwe dabere na data na-enyocha, weghachite ma na-egosi ndị ọrụ ọdịnaya gị. Enwere ton nke ihe ndị na-emetụta ọsọ ọsọ peeji gị - ihe niile nwere ike imeziwanye. Ndị ọrụ na-eleta ibe weebụ ngwa ngwa na-achọghị ibiaghachi wee pụọ… yabụ ngwa nchọta na-eleba anya na ọsọ ibe (Core Web Vitals na-elekwasị anya ntakịrị na arụmọrụ saịtị gị).
Njikwa Ihe di na peeji - Otu esi ahazi ibe gị, wuo ya, ma gosipụta ya na crawler search engine na-enyere onye na-achọ ihe aka ịghọta ihe ọdịnaya dị na isi okwu ndị ekwesịrị ịdepụta ya. Nke a nwere ike ịgụnye mkpado aha gị, isi okwu, okwu ndị nwere obi ike, ọdịnaya emesiri ike, data meta, snippets bara ụba, wdg.
Metadata – Meta deta bụ ozi adịghị ahụ anya nye onye na-ahụ anya nke ibe weebụ mana nke a haziri ya n'ụzọ nke igwe ihe nchọta nwere ike iri ya ngwa ngwa. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke nyiwe njikwa ọdịnaya na nyiwe ecommerce nwere oghere data meta nhọrọ nke ị kwesịrị ị na-erite uru nke ọma iji nweta aha ọdịnaya gị nke ọma.
Atụmatụ - Schema bụ ụzọ isi hazie na igosipụta data n'ime saịtị gị nke igwe nchọta nwere ike iri ngwa ngwa. Ibe ngwaahịa dị na ibe e-azụmahịa, dịka ọmụmaatụ, nwere ike ịnwe ozi ọnụahịa, nkọwapụta, ọnụọgụ ngwaahịa, na ozi ndị ọzọ nke igwe nchọta ga-egosipụta n'ụzọ kachasị mma. ọgaranya snippets na ibe nsonaazụ ọchụchọ.
Mgbakwunye Ime - Ndị isi nke saịtị na igodo gị bụ ihe nnọchianya nke mkpa ọdịnaya dị na saịtị gị. Ekwesịrị ka emeziwanye ha ma maka onye ọrụ gị yana iweta n'igwe nchọta nke ibe kachasị mkpa maka ọdịnaya gị na ahụmịhe onye ọrụ.
Njikọ azụ azụ dị mkpa yana ikike - Njikọ na saịtị gị sitere na saịtị dị na mpụga ka dị oke mkpa maka ogo, mana ekwesịrị ịhazi ya nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite ogo gị. Mgbasa Blogger, dịka ọmụmaatụ, nwere ike ịnye saịtị ndị dị mkpa na ụlọ ọrụ gị nwere nnukwu ọkwa na ọdịnaya nke jikọtara njikọ na ibe ma ọ bụ ngalaba gị. Agbanyeghị, ekwesịrị inweta ya na nnukwu ọdịnaya… akwaliteghị ya site na spamming, trades, ma ọ bụ atụmatụ njikọ akwụ ụgwọ. Ụzọ mara mma nke ịmepụta backlinks dị oke mkpa na ikike bụ site na ịmepụta nnukwu Ọwa YouTube emeziri nke ọma. Ụzọ dị mma isi nweta njikọ bụ imepụta na kesaa ọmarịcha infographic… dị ka Weebụsaịtị Red Red mere n'okpuru.
Chọọ mpaghara – Ọ bụrụ na saịtị gị bụ nnọchite anya ọrụ mpaghara, na-etinye akara ngosi mpaghara dị ka koodu mpaghara, adreesị, akara ala, aha obodo, wdg maka igwe nchọta ka ịdepụta ọdịnaya gị nke ọma maka ọchụchọ mpaghara. Ọzọkwa, azụmahịa gị kwesịrị ịgụnye Google Business na akwụkwọ ndekọ aha ndị ọzọ tụkwasịrị obi. Azụmahịa Google ga-eme ka ọhụhụ dị na maapụ emetụtara (nke a makwaara dị ka mkpọ map), akwụkwọ ndekọ aha ndị ọzọ ga-akwado izi ezi nke azụmahịa mpaghara gị.
Whew… nke ahụ dị ntakịrị. Ma ọ na-enye ntakịrị nghọta ihe kpatara onye na-ahụ maka teknụzụ ọchụchọ dị ọcha ezughị. Ogo nchọta organic nke taa chọrọ nguzozi nke onye nhazi ọdịnaya, teknụzụ teknụzụ, onye nyocha, onye ahịa dijitalụ, ọkachamara mmekọrịta ọha na eze, onye na-ese webụ… na ihe niile dị n'etiti. Ọbụghị ịkọwa otu ị ga-esi soro ndị ọbịa na-akpakọrịta mgbe ole ha na-abata - site na ijide data, nha, nkwukọrịta ahịa, njem dijitalụ, wdg.
Tags: gaa blogger outreachisi web vitalsgoogleazụmahịa googlegoogle ogo ihehttpsinfographicnjikọta n'imenjikọakwụkwọ ndekọ aha mpagharanchọta mpagharametadatamobile-mbụna peeji nke kachasịnhazi ọkwanyocha ọchụchọije ozigboihu peejinjikarịcha ọsọ ibeogo iheọgaranya snippetsatụmatụatụmatụ.nchebe weebụsaịtịASEO infographicnhazi ụlọSSLahụmahụ onye ọrụ
Oge gara aga, ugbu a, na ọdịnihu nke ala ire ahịa mmetụta mmetụta
Ịghọta Mgbasa Ozi Mmemme, Ọdịmma Ya, na Ndị isi Ad Tech